पाँच रुपैँयामा पिकनिक ! - Subhay Postपाँच रुपैँयामा पिकनिक ! - Subhay Post
सुभाय् संवाददाताJune 20, 2022 मा प्रकाशित (५ दिन अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ४ मिनेट
हो पाँच रुपैँयामा पिकनिक, सुन्दा गफ वा धेरै पुरानो कफ झैं लाग्न सक्छ तर त्यो पिकनिक धुमधामको थियो, घुमघामको थियो। पुरानो यामको भने पक्कै हो। कुरा २०३६ साल तिरको हो, हामी ७ कक्षामा पढ्थ्यौं । बैशाख-जेष्ठको उराठ लाग्दो समयलाई कसरी रमाइलो बनाउने भन्ने साथीहरु माझ हाफ ट्याममा बृहत छलफल भयो । अनेक बिकल्पहरु मध्ये पिकनिक जाने कुरामा लगभग सहमति भयो । स्कुलले अनिबार्य भनेको, घरबाट आ-आफ्नो खाजा बोकी गइएको बनभोज बाहेक पिकनिक नभोगेका नदेखेका लागि ठुलै चुनौती भयो। जाने त जाने कहाँ जाने? कसरी जाने? को को जाने? भन्ने सवाल अहम भए नि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न खर्च कति लाग्ने भन्नी थियो । हाफ ट्यामको अवकाश समयमा टुङ्गो नलागे पछि फूलट्याम पछि पुन: छलफल गर्ने गरी कार्यकारी समूहको बैठक स्थगित भयो ।
पुन: छलफलमा सबै भन्दा पायक पर्ने सवारी साधनको सुलभता भएको अझ भनौं सस्तो भएको सूर्य विनायक पिकनिक थलोको रुपमा फाइनल भयो । यसको कारण चाहिं ट्रलीबस चढ्न पाइने, ७५ पैसामा सुरु देखि अन्त्य सम्म अर्थात त्रिपुरेश्वर देखि सूर्य विनायक सम्म पुरा पैसा वसुल पनि हुने । अर्थ तथा बित्त बिशेषज्ञ मित्रले हिसाब किताब निकाले । ट्रलीबसको दुइतर्फी भाडा रु १.५०, दहि च्युरा र आलु अचार टन्न खाने, एक खन्चुवाले हदै खाए ३ रूप्पे ५० पैसाको दहि च्युरा खान्छ, अन्दाज गरियो । र प्रति व्यक्ति रु ५ पिकनिक खर्च निर्धारण गरियो । खर्च कति हुने थाहा भए पछि सहभागी संख्या क्रमश घट्न थाल्यो , सुरुमा पिकनिक जान खुट्टा उचाल्ने जुत्ताहरु १० जोर जति थिए, रु पाँचको घोषणा भए पछि घटेर ६ भए । किनकि त्यति बेला पैसा महँगो थियो, पाँच रुपैँया धेरै नै मानिन्थ्यो । खुट्टा उचालेर जुत्ता कस्ने हामी ६ को लागि पनि पाँच रूप्पेको लागि धेरै नै पापड पेल्नु पर्थ्यो नै ।
हाम्रो त्यो पहिलो अभियानको लागि ६ जना पनि उत्साहजनक उपस्थिति थियो । पिकनिक जाने शनिबार सहराँ घर हुने बिहान ८ बजे नै बसन्तपुरको इनारमा भेला भै साढे ८ को ट्रलीबस चढ्ने निर्णयानुसार ६ मध्ये ५ पाण्डव समयमै ट्रलीबस चढ्न त्रिपुरेश्वर पुग्यौं र ट्रली बसको रोमाञ्चक यात्रा सुरु गर्यौं । एकजना साथी भने मीन भवन, शंकरचिमबाट चढे । सूर्य विनायक पुगे पछि मन्दिरको बाटो नलागी राशन पानीको ब्यबस्था गर्न हामी भक्तपुर सहर तिर लाग्यौं । शंकरचिम घर हुने मित्रको मूल घर भक्तपुर भएकोले उनी नै पथ प्रदर्शक थिए । भादगाउँ अर्थात ख्वप:को ऐतिहासिक थलो फराकिलो आँखामा कैद गर्दै हामी जुजु धौ किन्न गयौं र संगैको जाकी बजी पसलमा ल्हुया बजी पनि किन्यौं । र अर्को एउटा खाजा पसलमा आलु अचार २ रुपैँयाको किन्यौं र पुन: सूर्य विनायकको बाटो नाप्यों । नपोखिने गरी जु जु धौ को धौ भेग: ( दही राखिएको माटोको भाँडो) बोक्न कम्ता गाह्रो भएको हैन । पालै पालो बोकी सूर्य विनायक मन्दिर पुग्यौं । भोक लागे पनि गणेशजीलाई “हाइ” नभनी केही गर्नु हुन्न भन्ने दर्शन र संस्कार चाहिं हामीमा थियो । दर्शन सर्सन गरी मन्दिर पछाडीको जंगलको एउटा समथर भुइँमा बस्यौं । ल फसाद ! अब खाने पो कसरी ? अहिले जस्तो कागज/प्लास्टिकको न प्लेट चम्चा नै थियो त्यति बेला न रेडिमेड लप्ते वा टपरी नै थियो । घरबाट कसैले केही ल्याएका पनि थिएनन् ।
बाटोमा समाचार पढ्न किनेको गोरखापत्र एकथान बाहेक केही थिएन । त्यै अखबार बिछाएर गोलमेच सम्मेलन स्टाइलमा बस्यौं र ३ वटा दहीको भाँडो नै प्लेट अनि हात नै चम्चा काँटा बनाउने र दुइ जनाको भागमा एउटा भेग: हुने भो । दही माथि च्युरा खन्याई दहि च्युरा मजाले खायौं, बिच्च-बिच्चमा आलु अचार टोक्दै , भुँडी नफुलुन्जेल खायौं । यसरी खायौं कि त्यहाँ जूठो केही थिएन झुठो केही थिएन, मात्र मित्रता र भित्रता थियो।
अनि त्यै रुखमुनि बुद्धत्व प्राप्त गरे झैं ज्ञानगुणको कुरा गर्यौं, बाल सुलभ जीवन जगतको चित्र कोर्यौं। अनि भबिष्यका सुनौला कल्पनाहरुमा कल्प्यौं । साँझ ढल्न अघि जिउ गल्न अघि घर पुग्नु थियो, भोलि फेरी स्कुल जानु थियो, केही पाठ पढ्नु थियो। पुन: ट्रलीबसको आनन्दी यात्रामा रम्दै त्रिपुरेश्वरमा झर्यौं र हुल बाँधेर हामी बसन्तपुर सम्म हामी पाँच पुग्यौं त्यसपछि हामी आ-आफ्नो घर लाग्यौं । यही हो हाम्रो पाँच रुपैँयाको पिकनिकको कथा । त्यो दहिको भेग: चाटी चाटी खाएको त्यो समयको पाङ्ग्राले ४३ बर्ष घुमिसक्यो । त्यो बेला भगवान साक्षी राखेर शुद्ध आत्माले देखेको सपना धेरै हद सम्म धेरैको पुरा भएको छ । हामी ६ मध्ये कोही चार्टर एकाउन्टांट भै जिन्दगीको हिसाब किताब दुरुस्त राख्दै हुनु हुन्छ भने कोही नेपाली आकाशमा सुरक्षित जहाज तैराउने जिम्मालिएर बसेका वरिष्ठ इन्जिनियर छन् । कोही पाँच तारे होटललाई म्यानेज गरेर बसेका छन् भने कोही सफल ब्यबसायी छन् । दुखले आर्जेको जिन्दगीलाई सुखले बाँच्दैछन् ।